फिटनेसको लागि कस्तो खानपान ? – MEDIA DARPAN
फिटनेसको लागि कस्तो खानपान ?
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित ३ कार्तिक २०७६, आईतवार १९:५७
आजको व्यस्त समयमा आफ्नो र परिवारका सदस्यहरुको फिटनेसको लागि हामी धेरै चिन्तित हुन्छौं । समयको अभावमा हामीहरु सधैं शरीरलाई मात्रै ख्याल गर्न पनि भ्याउँदैनौं । त्यसका कारण आफ्नो पेशाको आधारमा कस्तो अभ्यास गर्ने भन्ने जान्नु जरुरी हुन्छ । समय नहुँदा नहुँदै लामो समय अभ्यास गर्ने र खानामा ध्यान नदिने हो भने पनि यसले शरीरमा तात्विक भिन्नता ल्याउन सक्दैन । त्यसैले समयको अभाव भएको अवस्थामा थोरै अभ्यास गरेपनि खानामा ख्याल राखेर शरीर फिट राख्न सकिन्छ ।
अर्काेतर्फ, एक गृहिणी महिलाले जीवनमा कैयौं भूमिका निभाउने गर्छिन् । जस्तो एक माता, पत्नी, बुहारी, घरको रेखदेख गर्ने महिला, छोरी आदिको भूमिका निभाउनुपर्छ । त्यस्तै, एउटा छोराले पनि बाबु, छोरा, ज्वाईं, साथी, कामदार जस्तो अनेक किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यी सबै जिम्मेवारीहरु पूरा गरेर अभ्यासकै लागि धेरै समय निकाल्न पनि कठिन हुने गर्दछ । आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दागर्दै हामीलाई शरीरको बारेमा ख्याल गर्ने समय नै मिल्दैन । त्यसको लागि हामीहरु आफ्नो पेशा अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आफ्नो फिटनेस र सुन्दरताको लागि के गर्ने ?
फिटनेसका लागि बदाम र खाने समय
शरीरलाई फिट राख्नको लागि बदाम सबैभन्दा उपयुक्त खानेकुरा हो । बेलुका भिजाएको बदाम बिहान खाँदा पूरै दिन यसले शरीरमा शक्ति प्रदान गर्ने गर्दछ । यसबाट हामीहरु पूरै दिन आरामसँग भागदौड गर्नसक्छौं । बदाम खाने सही समय भनेको बिहानको खाजा खानुभन्दा पहिलेको समय हो । यसलाई बिहान खानको लागि समय मिलेन भने झोलामा राखेर कुनैपनि बेला खान सकिन्छ ।
त्यस्तै, रातभरी पानीमा भिजाएर खाँदा झनै फाइदा हुनेगर्छ । भिजाएर खाँदा यसमा नरमता पैदा हुन्छ र यसमा रहेको छिल्का सजिलैसँग यसबाट बाहिर आउँछ । जसका कारण यसलाई बच्चाहरु वा बुढाहरुले पनि सजिलैसँग खान सक्छन् । यसलाई चपाउन सहज हुने गर्दछ ।
खानाको प्रभाव बढी अभ्यासको कम
फिटनेसको लागि खानामा ध्यानदिनु महत्वपूर्ण छ भने अभ्यासमा खानाको तुलनामा कम ध्यानदिनु आवश्यक हुन्छ । खानाको सवालमा हामी यो ध्यान दिनुपर्छ कि हामी कहिले खाँदैछौं र के खाँदैछौं ? खानेको समय मिलेको खण्डमा पनि धेरै हदसम्म शरीरलाई सन्तुलनमा राख्न सकिन्छ । खानामा गुलियो र चिल्लो बस्तुहरु कम खानुपर्छ । त्यसपछि अभ्यासको सवालमा पनि हामी कम समय गरेपनि नित्य अभ्यास गर्नुपर्छ । एउटै समयमा हरेक दिन नबिराई अभ्यास गर्नाले पनि शरीर फिट राख्न सहज हुन्छ ।
संसारकी सबैभन्दा सुन्दर बालिका कस्ती होलिन् ?